Wasiiradda Waxbarashada DFS oo sheegtay in qaabka waxbarashada dalka loo maamulo ay wax weyn iska bedeli doonaan iyo wareysi aan arintaas ka wareysannay Agaasimaha waaxda waxbarashada G/Banaadir. | Codka Shacabka Soomaaliyeed
Waxaa shalay oo ay bishani aheyd 1da, marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda VOA qeybteeda af-soomaaliga, wasiiradda cusub ee wasaaradda waxbarashada federaalka Drs Khadar Bashiir Cali, oo lagu tilmaamo qof aqoon iyo waayo aragnimo dheeraad ah u leh waxbarashada dalka, xilkaan ka horna sida ay sheegtay iskuduwe ka aheyd isla wasaaradda waxbarashada ayaa su’aalo badan lagu weydiiyay barnaamijkaas. Waxaana su’aalaha ka mid ahaa mid ay weydiisay, gabar la yiraahdo Xaawo Cabdulqadir Axmed oo magaalada Luuq-Ganaane ee gobolka Gedo ka soo wactameysay. Xaawo waxa ay si horudhac ah uga sheekeysay duruufaha adag ee ku hareereysan waxbarashada magaaladaas iyo tayo darrada heysata, waxeyna weydiisay wasiiradda, Goorma ayuu gobolka Gedo helayaa saamigeeda waxbarashada?
Wasiirad Khadar waxa ay ku jawaabtay “waxa aan rabno inaan qabanno waa inaan systemka waxbarashada inaan gobollada u gudbinno, oo waxaan rabnaa inuu gobol kasta isxilqaamo oo uu gobolku sheegto baahiyahiisa, oo uu gobol kasta ogaado sidii uu u qaabeyn lahaa waxbarashadiisa. Arintuna waa ay ka baxday maxey Xamar qaban doontaa ee waa maxey Gedo qaban doontaa” Wasiiradda oo jawaabta su’aasha Xaawo sii wadata ayaa ku dartay “ gobolku waa inuu masuuliyad isi saaraa, oo adinka muwaadiniinta gobolka degan aad dhahdaan waxbarasho tayo leh ayaan ardaydeenna u dooneynaa, systemka hadda noogu weyn waa mid ku kooban centralka, taas waxeynu rabnaa inaynu ka bixinno oo si truly federal ah aan u shaqeyno, oo aan gobollada waxbarashada gaarsiinno laakiin aan masuuliyaddana aan gobollada saarno oo aan la soo fiirin Xamare, Gedow maxaad qaban kartaan adinku? Maxaadse u rabtiin muwaadiniintiinna? Maxaad muwadiniin tayo leh soo saaran kartaan? Marka masuuliyaddu aniga kaliya ma aha ee waa mid dhammaanteen na saaran habaryar” ayey ku soo gabagabeysay.
Wasiirad Khadar, waxa ay si cad u dul istaagtay qaabka ay isleedahay wuu saxan yahay ee loo maamuli karo waxbarashada dalka waqtigaan duruufaha badan jiraan, waxeyna si cad u sheegtay in masuuliyadda waxbaridda aysan saarneyn wasaaradda waxbarashada kaliya ee maamullada dhisan iyo kuwo goboleedkaba ay qeyb ku lee yihiin masuuliyaddaas.
Si aan arintaas wax dheeriya uga ogaanno ayaan fursad u helnay inaan taleefoon ku wareysanno Agaasimaha Waaxda Waxbarashada Maamulka G/Banaadir Mudane Cabdixakiin Cali Casir aanna weydiinay dhowr su’aal oo wareysigaas dheer nooga soo baxay oo ay ugu horeyso agaasimuhu sida uu u arko wareysiga ay dhiibtay wasiirad Khadar Bashiir?
Jawaab: Marka hore, waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo wasiirad Khadar Bashiir Cali, uguna duceeyo inuu ilaahey la garab galo xilkaan ummadda aadka ugu muhiimka ah oo aan ogahay inay tahay masuul ka soo dhalaali kara masuuliyaddaas. Sida aad wareysiga ka maqasheen, aqoon iyo waayo aragnimo fiican ayey wasiiraddu u leedahay wasaaradda ay ka shaqeyneyso, waxeyna garaneysaa duruufaha ku hareereysan, aad iyo aad ayaana u soo dhoweynayaa in maamulka waxbarashada la daadejiyo oo ay gobolladu masuuliyadda ka saaran ilmaha gobolladaas degan ay qaataan. Waxaana hubaa inay taasi soo dedejin doonto in kor loo qaado tayada iyo tirada ardayda iskuulaadka aada ee dalka Soomaaliya guud ahaan.
Suaal: Maadaama wasiiraddu lee dahay gobolladu waa inay masuuliyaddooda qaataan oo aysan dowladda dhexe ee federaalka ah kaliya soo fiirin, maxaa gobolka Banaadir u diyaarsan?
Jawaab: Waxa aan aad aad uga mahadcelinayaa fahamka iyo qaabka hadda ay wasaaraddu u fikireyso, oo ay rabto inay u maamusho waxbarashada dalka iyada oo masuuliyadda baahineysa. Sideed bilood ayaan wasaaradda ka dalbaneynay in sida hadda wasiiraddu sheegtay loo maamulo waxbarashada dalka oo ay ku jirto midda gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir waa gobol hooyo u ah waxbarashada dalka waana meeshii iyadoo ay duruufo adag jireen ka soo baxeen waxna ku barteen arday badan oo maanta dadka iyo dalka anfacay. Duruufaha ka hor waxaa gobolkaan ka jiray waxbarasho lacag la’aan ah oo runtii lagu dhigan jiray iskuullo waa weyn oo qaar badan oo ka mid ah maanta ay dayac tiran yihiin waxna lagu barto. Badankooda waa kuwo ay isticmaalaan iskuulaad gaar loo lee yahay. Qaar badan oo ka mid ahna waxaaba lagu qabtaa howlo aanan loogu talo gelin oo qaar ayaaba isbitaallo laga dhigay. Waaxda waxbarashada gobolka, waxa ay aad u daneyneysaa in waxbarashada qaabka loo maamulaayo uu noqdo midka ay wasiirad Khadar sheegtay, waxaana hubaa in waxweyn la qaban karo haddii iskaashi dhab ah uu yimaado oo loo wada istaago sidii ilmaha aanan waxbarashada helin ay waxbarasho u heli lahaayeen. Gobolka Banaadir, haddii masuuliyad la saaro oo loo sheego waxa uga aadan horumarinta waxbarashada gobolka ee maamulkiisa lagula xisaabtamayo, waxaan hubaa inuu gobolku ka soo dhalaali doono, waase in wasaaraddu soo saarto sharcigii kala cadeynayay shaqada wasaaradda Waxbarashada federaalka iyo midda gobollada ee uu gobolka Banaadir ka mid yahay.
Su’aal: Adoo soo koobaaya, muxuu rabaa inuu gobolka Banaadir qabto, haddii maamulka waxbarashada loo qaabeeyo qaabka hadda ay wasiiraddu ka dhawaajisay?
Jawaab: Ma rabo inaan ka hordhaco oo iyada oo aan sharciyadii fasaxeysay qaab maamuleedka waxbarashada dalka aysan wasaaraddu soo saarin inaan iraahdo waxaas iyo waxaas ayaan qabaneynaa, waxaanse si cad u sheegayaa in qaabka ay wasiiraddu sheegtay uu yahay qaabka ugu haboon ee loo hormarin karo maamulka waxbarashada dalka, waxaana looga dhaqmaa wadamo badan oo ay ku jiraan kuwa deriska ah oo ma aha mid u gaar ah Soomaaliya oo kaliya, waana in wasaaraddu lahaato kormeerka iyo la xisaabtanka maamulka gobollada si gobolladdu u qabtaan wixii ay wasaaraddu ka dalbatay inay qabtaan. Waxaan qabaa, in uu jiri doono tartarka ay wasiirad Khadar sheegtay oo noqonayo mid fayow oo u dhexeyn doona gobollada, waana middaas midda lagu kala ogaan doono maamullada gobollada adeega u sameeya muwaadiniinta degan meelaha ay maamulaan iyo kuwa hagrada oo la hara muwaadiniinta ay madaxda u yihiin. Waaxda waxbarashada waxa ay sugeysaa oo kaliya dhaqan gelinta qaabka ay wasiiraddu sheegtay, markaas ayaan soo bandhigi doonnaa qorshaha waxbarashada gobolka Banaadir oo ay nagula xisaabtami doonaan muwaadiniinta degan gobolka banadir annaggoo mar kasta iskaashi la sameyn doonna wasaaradda waxbarashada oo ay xarunteedu tahay magaalada Muqdisho.
Wareysiga oo dhinacyo badan taabtay, ayuu noola ekaa agaasimuhu mid aad u soo dhoweynaya qaabka ay wasiiradda cusub ee waxbarashu rabto inay gobollada uga qeyb qaataan tayeynta waxbarashada dalka, waana arki doonaa wixii ka qabsooma iyo weliba sida ay wasiiraddu uga dhabeyso qorshada ballaaran ee ay rabto inay wax uga bedesho qaabka loo maamulo waxbarashada dalka.
« Meel Marinta sharcigii xuquuqda ilmaha (UNCRC), muxuu ku soo kordhin doonaa xuquuqda ilmaha Soomaaliyeed?
Mid Ka mid ah Qoraaladii ugu danbeeyay ee Allaha u Naxariistee, Cabdishakuur Mire. IIBIYIHII WARGAYS-YADA MUQDISHO.!! »